Muxuu madaxweynaha Somaliland kaga hadlay khudbadii sanadlaha uu jeediyay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Muxuu madaxweynaha Somaliland kaga hadlay khudbadii sanadlaha uu jeediyay
March 24, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta khudbad u jeediyay xildhibaanada labada golaha ee guurtida iyo wakiilada Somaliland.
Khudbadda uu jeediyay Muuse Biixi Cabdi oo ahayd tii sanadlaha ee tan iyo markii la doortay ayaa waxaa uu diiradda ku saaray arimaha amaanka,dhaqaalaha,waxbarashada iyo ictiraaf raadinta maamulka uu hogaamiyo .
Biixi ayaa sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo ay waxbadan ka qabatay arimaha kobcinta dhaqaalaha,shaqo abuurka dhalinyarada iyo kasbashada saaxiibada caalamka oo uu tilmaamay in xukuumaddiisu ay guulo ka gaartay arimaha ictiraaf raadinta.
Mar uu ka hadlayay wadahadalada maamulkiisa iyo dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayuu sheegay in muddo dheer ay maamuladii ka horeeyay ku bixiyeen wadahadalada ,waxa uuna tilmaamay in xukuumaddiisa ay xoogga saarayso sidii loo aqoonsan lahaa Somaliland loona soo afjari lahaa wadahadalada ma uusan sharixin qorshaha maamulka uu hogaamiyo ee arintan.
Dowladda Turkiga ayuu sheegay in ay wax guul ah ka keeni weyday dhinaca wadahadalada maadama ay iyadu garwadeen ka ahayd sanadihii lasoo dhaafay hase ahaatee waxa uu tilmaamay in dowlado badan ay ku soo biireen dhexdhexaadinta maamulkiisa iyo dowlada Federaalka isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay in ay miro dhal noqdaan wadahadalada .
Muuse biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland ayaan gabi ahaanba khudbaddiisa kusoo hadal qaadin xurfugta maamulka uu hogaamiyo kala dhexeysa Puntland maadama ciidanka maamulkiisa ay dhaqdhaqaaqyo kawadaan gobolka Sanaag oo ay dhawaan deegaanka yube gacanta u gashay ciidanka maamulka uu hogaamiyo Biixi.
Si kastaba khudbadda Biixi uu maanta u jeediyay xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada Somaliland ayaa noqonaysa khudbaddii ugu horeysay uu u jeediyo mudo haatan laga joogo sanad iyo bilow xiligaas oo uu qabtay jagada madaxweynaha Somaliland.